Ufuna ukwazi ukuthi ukuqonda lokho maduze uqale ukulethwa?
Ngo senyanga okugcina enkathi yokukhulelwa, umama okhulelwe kukhona omningi ukwesaba. Futhi naphezu kweqiniso lokuthi wonke umuntu ethi ekuqaleni zomsebenzi akunakwenzeka ntokazi, abesifazane besaba ukuthi bangaqondi uma sekuyisikhathi ukuya esibhedlela. Kodwa ubunjalo zonke wacabanga: amasonto ambalwa ngaphambi "X" usuku abesifazane abakhulelwe uqale ukuzizwa izici ezahlukene isici ngokushesha ukuthi uzoqala ukulethwa.
Ngakho, iningi umhlangano uza ingane kufakazelwa iqiniso lokuthi esiswini phansi. Ingane elungiselela lokuzalwa, ikhanda lakhe ufakwa ukhalo futhi, ngenxa yalokho, kwesibeletho amathonsi. Kodwa abanye omama isisu ngakho iphansi lonke ukukhulelwa, kunzima ukuqaphela ushintsho esimweni ayekuso.
Uma ufuna ukufunda ukuqonda lokho maduze uqale ukulethwa, esiswini, ukugqoka ingubo ethile bese uhlole izinga inkaba, uma ngemuva kwesikhathi esithile liyoba ngaphansi Primechenie iphuzu, kubalulekile ukuhambisa isikhwama eduze umnyango. Kodwa kubalulekile ukuba thatha izilinganiso ngaphambili kuka amasonto 35, kuze kube yileso sikhathi, esiswini usengakwazi sikhule. Inkomba ezingaqondile, ukuthi ingane manje ngezansi, kungenzeka yokuthi isiqalo abakhulelwe ukuze uzizwe ungcono: pipsqueak akusho ukuphasa amaphaphu kulula ukuba sikwazi ukuphefumula, futhi isilungulela kufanele ukuhlehlela emuva kancane.
Wazi kanjani ukuthi maduze ukuthi uzoqala ukulethwa, kwamanye ngezizathu? Olunye uphawu abalulekile kuyinto ukudedelwa isikhwehlela ipulaki: Ungathi gelatinous mass Kwabiwa ezindleleni kobulili, mhlawumbe, kuyoba ngisho kube igazi streaks. Ungesabi nakancane, kungcono Nokho, ngempela inqubo yemvelo, ukhokho eshiya akubona bonke abesifazane abakhulelwe.
Futhi, bonke omama abakhulelwe azi ukuthi angasilawula kanjani ukuba siqonde lokho maduze uqale ukulethwa, ngokuvumelana esinye isici. Ngokuvamile, ngaphambi obhekwe ingane baqale ukuncipha futhi edemas ohlabayo abakhulelwe. Ukulahlekelwa isisindo lingafika amakhilogremu ambalwa. Kodwa izinyane babe dú ngalesi sikhathi. abelula yakhe abe kubonakale kancane, kodwa akumelwe enze buthaka. Ayindlala nayo ukulungiselela umsebenzi sína, yokuthola amandla. Kodwa uma unomuzwa wokuthi ongasakhululekile inyakaza noma zingabantu kancane obonakalayo ke xhumana nodokotela. Ngezikhathi ezinjalo, isicelo sokulawula ezengeziwe yabasebenzi bezempilo kuyoba engadingekile.
Ukwandiswa ukuqeqeshwa zomsebenzi, okwandisa umfutho wabo futhi izinkulumo mayelana ngokushesha kanjani ukuqala ukulethwa. Kaningi kuyenzeka ukuthi kancane kancane abe njalo, imvamisa yabo uyanda futhi emizweni kuthiwa iyakhula. Kulokhu-ke kungcono ukuya esibhedlela, ngakho ochwepheshe ungase uthi ngokuqinisekile ukuthi uyize umshikashika waqala. Yiqiniso, zikhona izimo lapho abesifazane abakhulelwe ithunyelwa ekhaya nge Kufinyeta amanga, kodwa ngokuvamile kwesokunxele esibhedlela elinde umhlangano nengane.
Kodwa uma uke waqala avuze amanzi (ngezinye izikhathi baya luningi ngempela), khona-ke akukho isikhathi sokukhuluma mayelana nendlela baqonde ukuthi maduze uqale ukulethwa. Sekuyisikhathi sokuya esibhedlela, kuze imvuthu engena ekukhanyeni uhlala isikhathi esincane kakhulu. Futhi, ningawenzi ukudonsa, uma uzwa Kufinyeta okuthatha imizuzwana engaba ngu-45, inqobo uma njalo lapho njalo ngemva kwemizuzu engu-5.
WEIGHT UKULAHLEKELWA - Izinzuzo Green Coffee!